ကျပ်သိန်း ၆၀ ခန့်ဖြင့်ရောင်းချမည့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ၏ မြေကွက်အချို့မှာ ရေမီးမရရှိခြင်း၊ လမ်းဖောက်ထားခြင်း မရှိသော နေရာများဖြစ်ပြီး ပေ ၄၀ x ပေ ၆၀ မြေတစ်ကွက် ကျပ် ၃၅ သိန်းဖြင့်ပင် ဝယ်သူမရှိသည - Myanmar Real Estate Exchange
Myanmar Real Estate Exchange
Agencies / Agents
How to register on mrx?
How to upload property?
How to download mrx app from play store?
How to upload property from mrx app?
ကျပ်သိန်း ၆၀ ခန့်ဖြင့်ရောင်းချမည့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ၏ မြေကွက်အချို့မှာ ရေမီးမရရှိခြင်း၊ လမ်းဖောက်ထားခြင်း မရှိသော နေရာများဖြစ်ပြီး ပေ ၄၀ x ပေ ၆၀ မြေတစ်ကွက် ကျပ် ၃၅ သိန်းဖြင့်ပင် ဝယ်သူမရှိသည
ကျပ်သိန်း ၆၀ ခန့်ဖြင့်ရောင်းချမည့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ၏ မြေကွက်အချို့မှာ ရေမီးမရရှိခြင်း၊ လမ်းဖောက်ထားခြင်း မရှိသော နေရာများဖြစ်ပြီး ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ မြေတစ်ကွက် ကျပ် ၃၅ သိန်းဖြင့်ပင် ဝယ်သူမရှိသည့်အခြေအနေ ဖြစ်နေခြင်း အပေါ် ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ရောင်းချမည့် မြေကွက်များအတွက် လျှောက်လွှာများကို အောက်တိုဘာ ၇ ရက်တွင် စတင်ရောင်းချလျက်ရှိသည်။
ယင်းသို့ရောင်းချမည့် မြေကွက်များအနက် အချို့မှာ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ ဖြစ်နေပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ သောက်သုံးရေ၊ လျှပ်စစ်မီးများ မရှိကြောင်း လျှောက်လွှာဝယ်ယူကာ မြေပြင်ကွင်းဆင်း ကြည့်ရှုခဲ့သူများကပြောကြားသည်။
တောင်ဒဂုံ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ အရှေ့ဒဂုံတို့ တွင် ပါဝင်နေသည့် မြေကွက်များမှာ ဝေးလံချောင်ကျသည့် နေရာများတွင်ရှိပြီး ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ မြေကွက်တစ်ကွက်လျှင် မြေပြင်ပေါက်ဈေး ကျပ် ၃၅သိန်းနှင့်ပင် ဝယ်သူ မရှိကြောင်းသိရသည်။
“ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဝယ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ၃၅ သိန်းနဲ့ဝယ်ထားတာပါ။ သူတို့ပေးတဲ့ ၁၅၃ ရပ်ကွက်မှာပဲ ဝယ်ထားတာ။ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက ပေးတဲ့မြေကို ကျွန်တော်တို့ သွားမလျှောက်ဘူး။ တန်းလည်း မစီဘူး။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့သိန်း ၆၀ ဆိုတာက တိုင်းအစိုးရကပေးတဲ့ ပေ ၄၀ ပေ ၆၀ မြေကွက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် မြေကွက် နှစ်ကွက်စာလောက်ရတယ်။ မသိတဲ့ လူတွေက အရမ်းကြီး လိုချင်နေကြတယ်။
တန်းစီကြတယ်။ တချို့ဆိုရင် တန်းမစီဘဲနဲ့ ချလန်တစ်ခုကို တစ်သိန်းနဲ့ ပေးဝယ်တာတောင် ရှိတယ်လို့ကြားတယ်” ဟု တောင်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးတော်ဆောင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဒဂုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး လျှောက်လွှာဝယ်ယူကာ မြေပြင်ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့သူ တစ်ဦးက ၎င်း၏ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်သည့် Tin Min Thant တွင် “ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ ပြည်သူကိုမြေကွက်များ ရောင်းချပေးရန် လျှောက်လွှာတစ်စောင် ၁၀၀၀၀ ကျပ် ရောင်းချပြီး လျှောက်လွှာနှင့်
အတူ ပူးတွဲပါဝင်လာသော မြေကွက်များကို မြေပြင်ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု၍ ဘယ်အကွက်ကို လျှောက်ရမလဲဟုကြည့်သောအခါတွင် တောင်ဒဂုံ၊ မြောက်ဒဂုံ၊အရှေ့ဒဂုံတို့တွင် ပါဝင်နေသော မြေကွက်များသည် မီးမရှိ။ လမ်းမရှိ။ စည်ပင်ရေမရှိ။ လိုင်းကားမရောက်သေး။ လူနေမှု မရှိသေးသော။ ဝေးလံ
သော နေရာများနှင့် ချောင်ကျသော နေရာများကသာများစုဖြစ်နေပြီး Taxi ခ ၃၀၀၀၀ ထပ်မံဆုံးရှုံးသွားရပါသည်။ အရှေ့ဒဂုံ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ယောက်၏ ပြောပြချက်အရ အဲဒီနေရာတွေက မြေပြင်ပေါက်ဈေး ၄၀ x ၆၀ တစ်ကွက် ၃၅ သိန်းတောင် ဝယ်သူမရှိကြောင်းလေ့လာသိရှိရပါသည်။ တချို့
နေရာများသည်ယခုအချိန်တွင်ရေများ၊ ရွှံ့နွံများဖြင့် သွားလာဖို့ အလွန်ခက်ခဲနေပါသေးသည်။ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ နေရာများတော့ ကျွန်တော် မသိပါ။ မိမိချွေးနှဲစာဖြင့်ရှာဖွေထားသော ငွေကလေးများ အလကား မဖြစ်ရအောင် သတိချပ်ကြ စေလိုပါ သည္” ဟု ေရးသားထားသည္။တိုင်းအစိုးရ
က ရောင်းချသည့် မြေကွက်များကို ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများမှာ မြေပေါ်တွင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းကို အမှန်ခြစ် အမှတ်အသားဖြင့် ဖော်ပြရန်၊ ငွေကြေးအထောက်အထား တင်ပြရန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊စက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အဆိုပြုချက်များအတွက် (အသုံးပြုငွေ ကြေးပမာဏ၊ လုပ်ငန်းစီမံချက်၊
အချိန်ကာလ) တို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လိုသူများသည် မြောင်းတကာ စက်မှုဇုန်နေရာကိုသာ လျှောက်ထားရမည်၊မူရင်းလျှောက်လွှာတစ်စောင်လျှင် မြေနေရာတစ်နေရာသာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိ ကြောင်း စသည့်စည်းကမ်းချက်များ သတ် မှတ်ထားသည်။ထို့ပြင် အသုံးပြုခွင့်ရရှိ
ထားသည့် မြေနေရာအား သုံးနှစ်အတွင်း ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမပြုရန်၊ မြေအသုံးပြုခွင့် ရရှိထားသူ မှာ ၎င်းရရှိထားသည့် မြေနေရာတွင် ခြောက်လအတွင်း စတင်ဆောက်လုပ်၍ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပါက မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊အသုံးပြုခွင့် ရရှိ
ထားသောမြေများကို လျှောက်ထားသူ အမည်ဖြင့်သာ ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး သုံးနှစ်အတွင်း အမည်ပြောင်းခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ မြေအသုံးပြုခွင့် ရရှိထားသူများ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ခွင့်ပြုထားသော မြေကိုလည်းကောင်း၊ မြေပေါ်ရှိ
အဆောက်အအုံများကိုလည်းကောင်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ပြန်လည် သိမ်းယူမည်ဖြစ်ပြီးပေးသွင်းငွေများကို ပြန်ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း အပါအဝင် စည်းကမ်းချက် ၁၃ ချက်ကို လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။အဆိုပါ မြေကွက်များမှာ (၄၀x၆၀)ပေ၊ (၆၀x၆၀)ပေ၊ (၆၀x၈၀)ပေ၊
(၆ဝ×၁၂၀)ပေ၊ (၁ဝဝ×၁၀၀)ပေ၊ (၁ဝဝ×၁၂၀)ပေ အကျယ်အဝန်းများရှိကြောင်း၊ လျှောက်လွှာဝယ်ယူရန် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မူရင်း/ မိတ္တူနှင့်အတူ လျှောက်လွှာတစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၁၀၀၀၀ ဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိသည်။လျှောက်လွှာဝယ်ယူသူများမှာ စုပေါင်းရုံးရှေ့တွင်ညအိပ်စောင့်ဆိုင်းကာ
ဝယ်ယူ နေမှုများရှိနေပြီး ဝယ်ယူထားသည့် လျှောက် လွှာများကိုပြင်ပတွင် ပြန်လည်ရောင်းချ နေသူများလည်းရှိသည်။
Credit : Daily Eleven
Interested in publishing your property on our website?
Click to list your property
Myanmar Real Estate Exchange(MRX.com.mm) is one of Myanmar's largest property experts offering you the best one-stop solution to match your need for selling, buying or rentingaproperty in Myanmar.
* We promise that we will not send you spam messages.
Get Mobile App for Tenants / Agents / Owners
© 2017-2019 MRX. All Rights reserved.